Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ၀ ပြည်နယ်တောင်း ( Wa state )
at 6/05/2013 01:50:00 AM
၀ ပြည်နယ်တောင်းတာကို သဲသဲမဲမဲ တုံ့ပြန်ကြတာ သတိထားမိပါတယ်။
၀ အဖွဲ့က ပြောတာကတော့ မြန်မာ ပြည် နဲ့ ရှမ်းပြည်ကနေ ခွဲထွက်ဖို့ မဟုတ်... သူတို့နည်း သူတို့ဟန် နှကိုယ်ကတည်းက ၀ ပြည် လို့ နှုတ်ကျိုးနေပြီးသား ကို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ လောက်ပါ တဲ့။
တုန့်ပြန်သူတွေရဲ့ ကွန်မန့်မှာ တွေ့တာက..
မတောင်းအပ်တဲ့ အရာ.. တဲ့..
လက်နက်အားကိုးပြီး တောင်းတယ်.. တဲ့။
တရုတ် အားကိုးပြီး မာ တယ်.. တဲ့။
ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေး လိုနေရာကနေ ၀ ပြည်နယ် ကို မပေးသင့်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။
လက်နက်မကိုင်တဲ့ လူမျိုးတွေ အသာတကြည် တောင်းရင် ပေးတတ်တဲ့ အကျင့်ကော ရှိပါသလား?
နောက်ပြီး ၀ ကို ပေးရင် ကျန် တိုင်းရင်းသား တွေကိုလဲ ပေးလာရမယ်.. လို့ ပြောကြတယ်။ မလိုဘူး လို့ ထင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေလဲ ရှိမှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ.. တချို့ကတော်လှန်ရေးမှ မလုပ်ပဲကိုး...
နောက်ပြီး ၀ တွေ ပြည်နယ် တောင်းတယ် ဆိုတာ ဟိုးးး. အရင့်အရင် ခေတ်ကတည်းက အခုထိ သူတို့လူမျိုးတွေ နေလာခဲ့တဲ့ နေရာကို
တောင်းတာပါ။ တမျိုးပြောရရင် ကိုယ့်ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ကို ကိုယ့်နာမည် ပေါက်အောင် တောင်းတဲ့ သဘောပါပဲ။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေခွင့် တောင်းတဲ့ သဘောပါပဲ။ မန္တလေး နဲ့ မိတ္ထီလာ လိုနေရာကို တောင်းတာ မဟုတ်။
၀ တွေက အရင်ကတည်းက ၀ ပြည် လို့ပဲ သုံးတာပါ။
ဒီတော့ ပေးသင့် မပေးသင့် ဆိုတာထက် အသိအမှတ်ပြုပေးသင့်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။